January 1, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'January 1st, 2017'
Shariif Sheekh Axmed oo Maanta Dalka Dib Ugu soo Laabtay, Madaxweyne Xasan Sheekh ku Tilmaamay Danbiile Qaran (Dhagayso)
January 01, 2017 – Waxaa maanta Magaalada Muqdisho soo gaaray madaxweynihii hore ee Soomaaliya ahna Musharax u taagan xilka Madaxweyne ee Shariif Sheekh Axmed. Iyadoo lagu guda jir waqtiyadii ugu dambeeyay ee olalaha Doorashada dalka Soomaaliya, ayaa waxaa Musharaxiin fara badani waxa ay ku sugan yihiin Magaalada Muqdisho. Shariif Sheekh Axmed, ayaa ah Musharax saameyn …
Ra’iisul Wasaare Cumar C/rashiid oo Maanta Booqday Xarunta Cusub ee loo Dhisay Aqalka Sare ee Baarlamaanka (SAWIRRO)
January 01, 2017 – Ra’iisul Wasaaraha dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ay weheliyaan xubno ka tirsan Aqalka sare ee baarlamaanka ayaa maanta kormeer ku tagey xafiisyada cusub oo loo diyaariyey in ay ku shaqeeyaan Xubnaha Aqalka Sare (sanate-ka)ee Soomaaliya. Ra’iisul wasaaha iyo xildhibaanadii la socday ayaa Waxa ay sidoo …
C/kariin Xuseen Guuleed & C/wali Gaas oo Maanta Muqdisho ku Heshiiyay (VIDEO)
January 01, 2017 – Madaxdaweyneyaasha maamulada Galmudug & Puntland ayaa maanta magaalada Muqdisho ku kala saxiixday heshiis cusub oo lagu xalinayo dagaalada soo noq-noqday ee magaalada Gaalkacyo. Heshiiskan ayaa yimid ka dib wadahadalo labada madaxweyne iyo xoghayaha Qaramada midoobay ee Michael Keating ku dhexmaray magalada Muqdisho kuwaasoo lagu sii ambaqaadayey sidii loo xoojin lahaa nabada …
Heshiiskii Gaas iyo Guuleed ee Muqdisho (VIDEO)
Heshiiskan ayaa yimid ka dib wadahadalo labada madaxweyne iyo xoghayaha Qaramada midoobay ee Michael Keating ku dhexmaray magalada Muqdisho kuwaasoo lagu sii ambaqaadayey sidii loo xoojin lahaa nabada ku soo noqotay magaalada Gaalkacyo. Qodobada maanta lagu heshiisyey ayaa waxaa kamid ahaa in si deg deg ah la’isugu furo isu socodka dadka iyo gaadiidka labada dhinac …
Xildhibaano ay kamid tahay Fowsiyo Yuusuf Maanta Lagu Doortay Magaalada Muqdisho (SAWIRRO)
January 01, 2017 – Magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxaa maanta lagu doortay Sadex Xildhibaan oo kamid noqondoona Aqalka hoose ee Baarlamaankafederaalka, Xildhibaanadan la doortay maanta ayaa kasoo jeeda Beelaha dega deegaanada Somaliland. Xildhibaanada maanta lagu doortay magaalada Muqdisho waxaa kamid ah Xildhibaanad Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan oo hore uga tirsaneyd Baarlamaankii hore …
Wasiir ka Tirsan Xukuumadda Dalka Burundi oo Maanta la Qaarijiyay
January 01, 2017 – Wasiirk ka tirsanaa xukuumadda dalka Burundi kaasi oo ahaa Wasiirka Deegaanka iyo Qorsheynta Gudaha iyo Biyaha ee dalkaasi oo lagu magacaabi jirey Emmanuel Niyonkuru ayaa la sheegay in saalkay Waaberigii hore ee saakay, waana dilkii ugu horreeyay ee ka dhaca dalkaasi tan iyo markii ay xiisadaha siyaasadeed ka qarxday dalkaasi. Afhayeenka …
DAAWO: Sideebaa Dunida Looga Dabaaldegay Habeenka Sanadka Cusub ee 2017-ka (VIDEO)
January 01, 2017 – Xalay oo ay ahayd habeenkii soo dhawaynta sanadka cusub ayaa waxaa dunida dacaladeeda ka dhacay xaflado waaweyn oo lagu soo dhawaynayo sanadka cusub ee 2017-ka. Wadamada kuyaala bariga fog sida Japan, Australia iyo New Zealand ayaa marka hore laga soo dhoweeyay sanadka cusub ee 2017, iyadoona dabaaldegyo waaweyn laga dhigay magaalooyinka …
Dabaaldagii Sanadka Cusub 2017 (VIDEO)
Wadamada kuyaala bariga fog sida Japan, Australia iyo New Zealand ayaa marka hore laga soo dhoweeyay sanadka cusub ee 2017, iyadoona dabaaldegyo waaweyn laga dhigay magaalooyinka caasimadda u ah waddamadaasi. Magaalooyinka Tokyo, Sydney iyo Auckland ayaa si weyn looga dareemay soo dhaweynta sanadka cusub. sanadka cusub ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay sidii awalba caadada u …
Xildhibaanada Aqalka Sare oo aan Qaadan Doonin Wax Mushaar ah Bilaha soo Socda, Maxaytahay Sababtu?
January 01, 2017 – Xildhibaanada cusub ee loo soo doortay Aqalka sare ee Baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa wax xuquuq ah iyo mushaar toona aan ka heli doonin Dowladda Soomaaliya Sadexda bilood ee ugu horeeya ee sanadkan cusub ee 2017-ka. Miisaaniyada Wasaarada Maaliyada Soomaaliya ayaanan ku jirin mushaaraadka la siinayo Xubnaha Aqalka sare oo lagu soo …
Weerar Argagixiso oo 35 ay ku Dhimatay oo Xalay ka Dhacay Maqaayad ku Taala Dalka Turkiga (VIDEO)
January 01, 2017 – Nin la sheegay inuu ku hubeysanaa qoriga AK-47ka ayaa xalay waxa uu weeraray baar xilliyada habeenkii lagu caweeyo oo ku yaala Magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, iyadoo halkaasi uu ku dilay dad gaaraya ilaa 35 qof. Maqaayadan oo lagu magacaabo Reina, ayaa xilligii la weeraraayay waxaa ku sugnaa in ka badan …